Real Madrid Oo Isku Diyaarineysa Mbappe, Juve Oo 5 Xiddig Uu Ku Jiro De Gea Si Bilaash Kula Wareegeysa & Wararkii Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Sabti Ah - Gool24.Net
Real Madrid Oo Isku Diyaarineysa Mbappe, Juve Oo 5 Xiddig Uu Ku Jiro De Gea Si Bilaash Kula Wareegeysa & Wararkii Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Sabti Ah
September 7, 2019 Saed Balaleti
Inkastoo suuqa kala iibsiga xagaaga uu soo xirmay hadana xanta suuqa ma ahan mid joogsaneysa, waxaana durbaba la isku diyaarinayaa suuqa furmaya bisha Janaayo, iyadoo warbaahinta kubada cagta ay ka hadlayaan xiddigaha la bartilmaameedsanayo.
Hadaba waxaa maanta oo Sabti ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada Yurub ka soo baxa:
Tababaraha kooxda Juventus Maurizo Sarre ayaa qorsheynaya in xagaaga 2020 inuu la wareego dhowr xiddig oo Premier League ka ciyaarta, waxaana uu xaqiiq ahaan doonayaa inuu ilaa shan xiddig kula wareego si bilaash ah oo ay ku jiraan goolhayaha Manchester United David de Gea iyo labada xiddig ee Tottenham Toby Alderweireld iyo Christian Eriksen. (Daily Star)
Real Madrid ayaa u dhaqaaqi doonta weeraryahanka Faransiiska ee Paris Saint-Germain Kylian Mbappe oo 20 sanno jir ah xagaaga danbe. Kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaa uga digtay Barcelona qorshaha Real Madrid intii ay labada kooxood ka wada hadlayeen heshiiskii fashilmay ee Neymar. (Sport)
Chris Smalling ayaa diyaar u ah inuu si rasmi ah uga wada tago kooxda Manchester United ka dib markii uu 29 jirka daafaca England heshiis amaah ah ugu wareegay AS Roma. (Daily Mirror)
Daafaca Man United ee reer Argentina Marcos Rojo oo 29 sanno jir ah ayaa diyaar u ah inuu kooxda ka tago bisha Janaayo madaama uu xagaagii ku guuldareystay inuu u wareego Everton. (Ole)
Kooxda heysata horyaalka Spain ee Barcelona ayaa dooneysa 25 jirka garabka ka ciyaara ee Talyaaniga ee kooxda Juventus Federico Bernardeschi xagaagii. (Mundo Deportivo)
Manchester City ayaa durbaba heshiis ka gaartay saxiixa weeraryahanka kooxda reer Serbia ee FK Cukaricki 19 jirka Slobodan Tedic kaasoo si rasmi ah ugu soo biiri doona bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga. (Manchester Evening News)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa iska diiday fursad uu kula wareego xiddiga Barcelona Philippe Coutinho ka hor inta uusan 27 jirkaan amaah ugu wareegin Bayern Munich. (Marca)
Juventus ayaa soo gashay tartanka saxixia 20 jirka khadka dhexe ee Bayer Leverkusen Kai Havertz kaasooo sidoo kale lala xiriirinayay kooxda Liverpool. (Calciomercato)
Daaficii hore ee kooxda Leicester City Danny Simpson ayaa tababar la qaadanaya kooxda West Ham isagoo raadinaya koox cusub. (The Sun)
Kieran Trippier ayaa tayadiisa uga yaabsaday asxaabtiisa cusub ee Atletico Madrid, waxaana uu doonayaa inuu xureysto booska daafaca midig ee xulka England. (The Sun)
Eden Hazard ayaa taam u noqon doona kulankiisii ugu horeysay ee Real Madrid ee horyaalka La Liga ka dib marka laga soo laabto ciyaaraha caalamka, iyadoo Los Blancos ay Sabtida soo socota soo dhaweyn doonto kooxda Levante. (The Sun)
Weeraryahanka kooxda Chelsea Olivier Giroud ayaa u furan fekerka ah inuu u wareego horyaalka Mareykanka marka qandaraaskiisa Blues uu dhamaado xagaaga danbe. (Daily Mirror)